Mi Watch waa ceebta ugu dambeysa ee loo yaqaan 'Xiaomi' ee naqshadeynta | Wararka IPhone
Mi Watch waa ceebta ugu weyn ee Xiaomi ee naqshadeynta
Xiaomi ma casaan wejigeeda mar kasta oo ay soo bandhigto qalab cusub waa caddeyn, waxaa kaliya lagama maarmaan ah in lagu wareego Mi Mi kasta oo ku yaal Spain si loo ogaado dhowr ilbiriqsi gudahood urka baaxadda leh ee Dukaanka Apple oo uraya, taas oo dabcan ilaalinaysa inay guud ahaan waxay ku yaalliin dhismooyin yaryar oo ka jaban. Siyaasadda naqshadeynta Xiaomi waxay ku saleysneyd sanadihii la soo dhaafay iyadoo u eg Apple sida ugu macquulsan, taasi waa caddeyn, laakiin qaar ka mid ah nashqadeeyaasheeda ayaa durba waa kuwa xun, tusaalaha ugu dambeeya waa Xiaomi Mi Watch, saacad u eg sida ay tahay, Apple Watch "jaban".
Fiidiyowgaan waxaa lagu sii daayay YouTube, isticmaalaha Aamir Siddiqui, taas oo aan ku arki karno soddon ilbiriqsi oo keliya xiisaha adeegsadaha xiisaha leh ee Xiaomi Mi Watch. Way cadahay in saacada ay si xoogan u dhiiri galisay nashqada Apple Watch, waxay leedahay istcimaalo isticmaale oo asal ahaan ku dhex wareegaya taajka dhinaca midig, taaj u muuqda mid macno ahaan laga soo qaatay silsiladda wax soo saarka Apple Watch oo lagu dhajiyay "super glue" saacaddaas Xiaomi. Muuqaal kale oo ay iyaguna aad isugu eg yihiin ayaa ku jira qaybta hore.
Waxyaabaha waxoogaa ayaa is beddelaya haddii aan tagno qoryaha, halkaas oo si cad Xiaomi u fulin karin shaqada naqshadeynta ee Apple u adeegsado Apple Watch Series 5, in kasta oo ay tahay in la sheego in shaashadu ay leedahay meegaarro aad u guuleysta. Waxay umuuqataa in nidaamka qalliinka (sidoo kale aad ula mid yahay watchOS) inuu si hufan u shaqeeyo, waana marka laga reebo "nuqulada" heerka naqshadeynta, Xiaomi waxaa lagu gartaa inay siiso qiimo aad u wanaagsan oo lacag ah. Waqtigan xaadirka ah, waan sii wadeynaa inaan sugno Mi Watch-kan, ma wuxuu noqon doonaa mid run ah oo loo tartamo Apple Watch mise wuxuu ku halligi doonaa isku dayga sida kuwa kale oo dhan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Mi Watch waa ceebta ugu weyn ee Xiaomi ee naqshadeynta
Waxay noqon doontaa nuqul cad, laakiin qof walba wuu ogyahay inay ka sii fiican yihiin tiknoolajiyadda iPhone-ka, hadda shirkaddaas waxba kama beddelayso!
Ku jawaab Chaill
iPhone maahan shirkad
Digniin! Tufaaxa Apple !!!
Ku jawaab Xiaomi
Nacalad, waxaa si cad loo arkaa inaad Apple difaaceyso dhimashada, maahan inay wax walba ku wareegaan shirkaddaas. Waxaan kugula talin lahaa in qoraaladaadu ay joojiyaan inay ahaadaan fanboy in waxa kaliya ee aad ku guuleysato ay tahay in qofna uusan si dhab ah u qaadan boggaaga
Maaha in Apple kugula jirtay liiska mushaharka ... ama haddii? Sidaad jeceshahay ama aad uyar jeclaato, Xiaomi waxay soo saartaa farsamo yaqaan aad u wanaagsan oo wax walba ka sarreeya qiimo aad u wanaagsan, tani aad ayey noogu fiican tahay, macaamiisha tan iyo markii aan haysanno badeecooyin badan oo aan ka dooran karno iyo Xiaomi waxaa soo min guuriyey ama dhiirrigelin doona Apple, oo waxay ila egyihiin ila qumman, maya haba yaraatee Waxay jecelyihiin nidaamka ku shaqeeya Apple laakiin hadii naqshadooda, waxaan jeclaan lahaa Apple inay soo saarto iPhone leh nashqad Android ah Hal talo, ha u helin wax been abuur ah oo wax yar oo dhex dhexaad ah maqaalladaada ah oo aakhirka aad lumiso akhristayaasha, maskaxda ku hay in inteena badani ay yihiin guud ahaan kuwa jecel tikniyoolajiyadda.
Laakiin haddii Xiaomi lafteeda ay sidaa tiri: waxaa dhiirrigeliya Apple. Taasi sir ma aha; waxaa intaa dheer, DHAMMAAN NOOCYADA FARSAMO EE FARSAMO AYAA SAMEEYA. Halkaas waxaan ku haynaa tusaalaha cad ee muuqaalka / sunnaha / muuqaalka ama wax kasta oo loogu yeero, si cad oo iPhone ah ogeysiisyada laguma soo bandhigo shaashadda dusheeda sidaa darteed waa wax macno samaynaya, in kasta oo ay dhammaan soo saarayaashu u socdaan si ay u soo bandhigaan Android halkaasoo ogeysiisyada ay saameeyeen. Waxyaabaha aan macnaha lahayn
Jawaab Eduardo A.
Warka IPhone ama mawduuca iPhone?
Maxaa yeelay illaa dhexda sadarka ugu dambeeya waxaan arkay aragtidaada oo keliya
Ku jawaab erdamutosE
Si cad Apple ayaa ku siisa mushahar.
Ku jawaab Xiao chan
Wuxuu hadda ogaaday inuu wax badan ku bixiyay iwatch markii uu iibsan lahaa wax la mid ah ka qiimo jaban, waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ku kala duwan yihiin waa qiimaha iyo in xiaomi uusan laheyn tufaax.
Ku jawaab Tamara
Waxaad u muuqataa mid aqoon badan u leh astaamaha Apple Watch, gaar ahaan ugu yeerida iWatch. 😉
Waa maxay iWatch? LOL.
Wuxuu albaabkeyga dhigay albaabka 'Tesla Model 3' isagoo ku beddelaya sheygan.
Waxaan kugula talin lahaa marka aad ku aragto maqaal ku yaal boggan (oo aan xumaan lahayn), waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso ka hor intaadan aqrin waa inaad fiirisaa qofka uu yahay qoraaga maqaalka… Waad ogtahay qofka uusan aqrin si aan loo aqrin Waqti lumis.
Salaan ka timid taageere Apple ah.
Haber, iyadoon loo eegin sida nuqul ka mid ah AppleWatch, uu sii wado inuu u dhigmo waxqabadka uu ku siinayo, marka lagu daro batteriga baabi’inaya, kala bar ama xitaa ka badan. Ha noqonin sida qof Apple fanboy ah oo baro inaad ku soo sheegto waxyaabo fikrad dhab ah oo dhab ah, oo aan ku saleysneyn dookhaaga.
Sidee ku ogaan kartaa faahfaahintaas oo dhan haddii aan weli la bilaabin Xiaomi Mi Watch? : S
Ka taxaddar ninkaas colic ah. Maqaalka waa la saxeexay, oo ka hooseeya cinwaanka, oo leh magaca iyo magaca qoyska, waxaan kugula talinayaa inaad si taxaddar leh u akhrido.
Waad salaaman tihiin. Anigu waxaan ahay taageere Apple iyo taleefanka gacanta (dhammaan tiknoolajiyada guud ahaan) waxaan iibinayaa iPhone XS oo aan u beddelay xiaomi MI 9 (waa nooca 6-aad ee aan ku haysto sumaddan), sidoo kale wuxuu lahaa 3 AppleWatch iyo laba xoogaa amazfit (oo hadda ah Versa). Xiaomi si aad u wanaagsan ayey u shaqeysaa (qiime aad u saraysa leh), in tikniyoolajiyadda Apple ay aad u guuleysato qof walbana uu doonayo inuu nuqul ka sameeyo, waa hagaag, haa, laakiin waxaan u maleynayaa inaad tahay mid aan dhex dhexaad ka aheyn si aad u qorto maqaal ku saabsan wax soo saar kasta, qof walba kuma noola Apple, waxaa jira dhadhammo kala duwan oo ay tahay in la ixtiraamo, qofkii jecel inuu iibsado iyo qofkii doonaya calaamado kale inuu ku kaco. Si fudud taas, si dhexdhexaad ah uga warbixiya sheyga, taasi, waxaan u maleynayaa, inay tahay maqaal wanaagsan.
U adeegso sidii dhaliil wax dhisaysa.
Ku jawaab Yurito
11x10 Podcast: Cusbooneysiinta, Dhiqlaha, iyo AirPods Pro
Diiwaan Gelinta Ardayda Apple Music waxay ka koobnaan doontaa AppleTV Bilaash ah +